Maamuus Sharafta 5aad: qeexitaannada, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah | Androidsis
Toddobaadyo ka hor ayaa la muujiyay in Honor 9X keligiis ma imaan doono, laakiin jiilka cusub ee jijimooyinka astaanta ayaa la soo bandhigi doonaa. Jijimadani waa Sharafta Kooxda 5, taas oo aan ugu dambayntii awoodnay inaan hadda si rasmi ah u ogaanno. Halka toddobaad ka hor inta badan qeexitaannada ayaa horey loo sii daayay isku mid ah, laakiin hadda waa wax rasmi ah oo ku saabsan jijimadan.
Kooxda Honor Band 5 ayaa dib loo cusbooneysiiyay, iyadoo qaab cusub loo sameeyay iyo howlo cusub. Jijin loo yaqaan inuu noqdo mid ka mid ah tartamayaasha waaweyn ee Xiaomi Mi Smartband 4 suuqa caalamiga ah. Waxay si fiican u qabataa marka la eego howlaha, waxayna la timid qiime lagu hagaajiyay suuqa. Wax kasta oo isticmaalayaashu raadinayaan.
Shaashadda ayaa xoogaa ka weyn markan, ka sokow inuu yahay shaashad midab leh. Marka waa jiilkii ugu horreeyay ee sumcadda Shiinaha ah ee leh shaashadda noocan ah. Midabo kala duwan ayaa sidoo kale lagu soo bandhigaa xariggiisa, sidaan horayba u aragnay. Marka naqshadeynta waa la cusbooneysiiyay, qaab ka soo jiidasho badan macaamiisha.
Maamuus 9X iyo 9X Pro: Nooca cusub ee bartamaha
1 Qeexitaannada Sharafta Kooxda 5
Qeexitaannada Sharafta Kooxda 5
Qaar ka mid ah qeexitaannada kooxdan Sharafta leh '5' ayaa la xaday dhowr toddobaad ka hor. Thanks to shaandhayntan waxaan horeyba u heli karnay fikrad ah waxa sumcadda Shiinaha ay naga tegeyso jijintan cusub. Horumar muuqda ayaa ku jirasida adeegsiga shaashad weyn oo AMOLED ah. Intaas waxaa sii dheer, waxaa la xaqiijiyay in aan ka dhex helno shaqooyin cusub, taas oo u oggolaan doonta adeegsi wanaagsan markasta. Kuwani waa qeexitaankiisa:
100 mAh batari
43 x 17,2 x 11,5mm cabirka
Miisaanka 22,7 garaam
Quusin karo ilaa 50 m qoto dheer
Dareemayaal lagu cabbirayo garaaca wadnaha iyo dhaqdhaqaaqa, heerka oksijiinta dhiigga
La jaan qaada Android 4.4 iyo wixii ka sareeya, macruufka 9.0 iyo wixii ka sareeya
Noocyada leh NFC iyo la'aan NFC
Kooxda Honor Band 5 waxaa loo soo bandhigay sidii jijin loogu talagalay cayaartoyda. Maaddaama ay noo oggolaaneyso inaan u isticmaalno cayaaraha kala duwan. Waxay awood u leedahay inay aqoonsato toban nooc oo isboorti oo kala duwan, sida baaskiil wadista, dabaasha, jimicsiyada wadnaha qaarkood, ama orodka gudaha iyo dibadda. Marka waa jijin in wax badan laga soo baxo. Xaalada dabaasha, sidaad horeyba u ogaan laheyd, waxay noqoneysaa mid quusin kara ilaa 50 mitir qoto dheer. Waxaa loo isticmaali karaa dhibaato la'aan sidaa darteed.
Jijimadu waxay leedahay dareemayaal kormeera garaaca wadnaha markasta, marka lagu daro haysashada qalabka hurdada. Waxay sidoo kale na siin doontaa xog ku saabsan masaafada la soo safray iyo kalooriyada gubatay, sida caadiga u ah badeecada noocan ah. Batariga Honor Band 5 wuxuu leeyahay awood dhan 100 Mah, taasi waxay na siin doontaa ilaa 6 maalmood ismaamul, sida ay ka yiraahdaan shirkadda, haddii aan u isticmaalno garaaca wadnaha si joogto ah gudaha. Waxaa lagu sii deyn doonaa laba nooc, midkood NFC iyo mid aan NFC lahayn.
Kooxda Honor Band 5 ayaa horey si rasmi ah loogu soo bandhigay Shiinaha. Xilligan la joogo waa kaliya suuqa kaas oo la bilaabay la xaqiijiyayXaqiiqdii, nooca NFC-ka ee jijimadu horeyba waa looga iibsan karaa waddanka, bogagga internetka ee kaladuwan. Waxaa lagu iibinayaa seddex midab, kuwaas oo ah waxa aan ku aragnay sawirada (buluug, madow iyo casaan). Iyagu waa midabada kaliya ee la heli karo.
Marka laga hadlayo Shiinaha, nooca aan lahayn NFC ayaa lagu iibinayaa qiimo dhan 189 yuan (25 euro si wax badan ama ka yar loo beddelo). Halka nooca NFC la bilaabay 29-kii July, iyadoo lagu qiimeeyay 219 yuan (29 euro in la beddelo). Waqtigaan la joogo ma jiraan taariikhihii lagu soo bandhigayay jijintan Yurub, inkasta oo la filayo inay imaan doonto.
Laba todobaad ka hor qeexitaannadan Sharafta Sharafta 5 ayaa la xaday, maxaa yeelay waxaa lagu daabacay Amazon Germany. Xaaladdaas, waxay ahayd qiimaha iibka ah ee 59,90 euro ee nooca aan lahayn NFC. Intaa waxaa dheer, waxaa lagu qiyaasayaa in la bilaabi karo Ogosto 15, ugu yaraan Jarmalka. Laakiin illaa iyo hadda shirkaddu wax kama aysan oran oo ku saabsan bilowgeeda Yurub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Smartwatch » Maamuus Band 5: jijimmo waxqabad cusub oo summaddu leedahay
ASUS ROG Qiimaha telefoonka II iyo taariikhda la sii daayo ayaa la muujiyay